သင်္ကြန်နောက်ဆုံးနေ့မှာ မိသားစုနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်စွာရေကစားနေတဲ့ မင်းသားဇဏ်ခီ
သင်္ကြန်နောက်ဆုံးနေ့မှာ မိသားစုနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်စွာရေကစားနေတဲ့ ဥပါယ်တံမျဉ်မင်းသားချော
16 Apr 2018 . 5:43 PM
ဥပါယ်တံမျဉ်နှင့် မုဒြာရဲ့ခေါ်သံ ဇာတ်ကားတို့ နဲ့ နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ မင်းသားဇဏ်ခီဟာ သင်္ကြန်အတတ်နေ့ မှာ မိသားစုနဲ့ အတူပျော်ရွှင်စွာ ရေကစားနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။သင်္ကြန်အကြတ်နေ့ က လည်း ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်မဏ္ဍပ်မှာ အမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့ ဒါရိုက်တာ ခရစ်စတီးနားခီ နဲ့ အတူတူ ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။
မင်းသားဇဏ်ခီနှင့် သူ့ရဲ့ သားလေး
ဒီနေ့မှာတော့ မိသားစု နဲ့အတူ ဖြတ်သန်းနေတဲ့ သင်္ကြန်ပုံရိပ်တွေကို ဒါရိုက်တာခရစ်စတီးနားခီကအခုလိုရေးပြီး တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Last day of Thingyan..
Peace and love to you all from us. ”
အခုဆိုရင် မုဒြာရဲ့ခေါ်သံ ဇာတ်ကားဟာလည်း ရုံတင်ထားတာဆိုရင် ငါးပတ်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ သင်္ကြန်ပြီးလို့ နှစ်ဆန်း နှစ်ရက်နေ့ ကို ရောက်တဲ့အခါမှာလည်း ဥပါယ်တံမျဉ် ဇာတ်လမ်းကို JCGV ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာ ပြန်လည်ပြသသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။
Photo Credit:Chirstina Kyi Facebook
သင်ျကွနျနောကျဆုံးနမှေ့ာ မိသားစုနဲ့အတူ ပြျောရှငျစှာရကေစားနတေဲ့ ဥပါယျတံမဉျြမငျးသားခြော
ဥပါယျတံမဉျြ ၊ မုဒွာရဲ့ချေါသံ ဇာတျကားတို့ နဲ့ နာမညျကွီးခဲ့တဲ့ မငျးသားဇဏျခီဟာ သင်ျကွနျအတတျနေ့ မှာ မိသားစုနဲ့ အတူပြျောရှငျစှာ ရကေစားနတောကို တှရေ့ပါတယျ။သင်ျကွနျအကွတျနေ့ က လညျး ရနျကုနျမွို့တျောဝနျမဏ်ဍပျမှာ အမြိုးသမီးဖွဈတဲ့ ဒါရိုကျတာ ခရဈစတီးနားခီ နဲ့ အတူတူ ဖြျောဖွခေဲ့ပါတယျ။
မငျးသားဇဏျခီနှငျ့ သူ့ရဲ့ သားလေး
ဒီနမှေ့ာတော့ မိသားစု နဲ့အတူ ဖွတျသနျးနတေဲ့ သင်ျကွနျပုံရိပျတှကေို ဒါရိုကျတာခရဈစတီးနားခီကအခုလိုရေးပွီး တငျထားတာဖွဈပါတယျ။
အခုဆိုရငျ မုဒွာရဲ့ချေါသံ ဇာတျကားဟာလညျး ရုံတငျထားတာဆိုရငျ ငါးပတျမွောကျခဲ့ပွီဖွဈပါတယျ။ သင်ျကွနျပွီးလို့ နှဈဆနျး နှဈရကျနေ့ ကို ရောကျတဲ့အခါမှာလညျး ဥပါယျတံမဉျြ ဇာတျလမျးကို JCGV ရုပျရှငျရုံတှမှော ပွနျလညျပွသသှားမှာဖွဈတယျလို့လညျးသိရပါတယျ။